သငျ့ကလေးကို ဟငျးသီးဟငျးရှကျ ပိုပွီးစားဖို့ ဘယျလိုအားပေးမလဲ?
Home Child Nutrition သငျ့ကလေးကို ဟငျးသီးဟငျးရှကျ ပိုပွီးစားဖို့ ဘယျလိုအားပေးမလဲ?
ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေို စားဖို့ ကလေးကို အားပေးအားမွှောကျပွုရတာဟာ တခါတရံမှာ စိနျချေါမှုတဈရပျဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြားက ကနျြးမာသော အစားအစာရဲ့ အရေးပါသော အစိတျအပိုငျးတဈခုဖွဈတာကွောငျ့ သငျ့ကလေးကို ဟငျးသီးဟငျးရှကျပိုစားဖို့ အလအေ့ကငျြ့လုပျပေးတာက အရေးပါပါတယျ။
ဟငျးသီးဟငျးရှကျ စားသုံးခွငျး ကလေးတှအေတှကျ ဘာ့ကွောငျ့အရေးပါတာလဲ?
ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေ သငျ့ကလေးကို စှမျးအငျ၊ ဗီတာမငျ၊ အငျတီအောငျ့ဆီဒငျ့၊ အမြှငျဓါတျနဲ့ ရကေိုပေးပါတယျ။ သူတို့က သငျ့ကလေးရဲ့ခန်ဓာကိုယျကို ရောဂါအမြိုးမြိုးကနေ ဆနျ့ကငျြကာကှယျပေးပါတယျ။
ကနျြးမာတဲ့ အစားအစာဆိုတာ တခွားအစားအစာအုပျစုမြားကနေ အမြိုးမြိုးသောအစားအစာ တို့အပွငျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျအမြားကွီး စားသုံးခွငျးကို ဆိုလိုပါတယျ။ သွစတွေးလအြစားအသောကျလမျးညှနျခကျြမြားက ၈နှဈအောကျ ကလေးငယျမြားကို နတေို့ငျး ဟငျးသီးဟငျးရှကျ 2-4½ ကြှေးဖို့ အကွံပွုထားပါတယျ။ သငျ့ကလေးဟာ ဟငျးသီးဟငျးရှကျကို အလုံအလောကျကြှေးဖို့ ခကျခဲနရေငျ ဘယျလိုစားခငျြအောငျကြှေးရမလဲဆိုတာ အရေးကွီးပါတယျ။
၁။ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြားနှငျ့အတူ ဥပမာကောငျးတဈခု သတျမှတျပါ
သငျ့ကလေးဟာ သငျ့ဆီကနေ အစားအစာရှေးခယျြမှုအကွောငျး သိရှိလာတာကွောငျ့ သငျ့ကလေးကို ဟငျးသီးဟငျးရှကျစားဖို့ အားပေးအားမွှောကျပွုရမယျ့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးက သငျစားတာကို သူမွငျပွီး သငျကိုယျတိုငျက ပြျောရှငျနတေဲ့ပုံ၊ ကွိုကျနှဈသကျတဲ့ပုံ ဖွဈရပါမယျ။ မိသားစုထမငျးဝိုငျးက ဟငျးသီးဟငျးရှကျစားခွငျး အပါအဝငျ ကနျြးမာတဲ့ စားသောကျမှုအကွောငျးကို သငျ့ကလေးအား သငျဖို့ အကောငျးဆုံးအခြိနျဖွဈပါတယျ။ ဟငျးသီးဟငျးရှကျကို အရသာရှိရှိ ကွျောကြှေးတာ၊ သုတျကြှေးတာ ပွုလုပျပေးနိုငျပါတယျ။
၂။ ဟငျးသီးဟငျးရှကျကို မွညျးစမျးတဲ့အနနေဲ့ ကြှေးပါ
ကလေးတှဟော ပထမဆုံး သူတို့မွညျးစမျးကွညျ့တဲ့အခါ ဟငျးသီးဟငျးရှကျကို မကွိုကျဘူးလို့ ပွောတတျကွပါတယျ။ ဒါကပုံမှနျပါပဲ။ တခါမှမစားဖူးတဲ့ အသီးအရှကျ ဆိုရငျလညျး မကွိုကျတတျကွပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ သူတို့ကို အစားစားခြိနျမှာမွညျးစမျးတဲ့အနနေဲ့ အနညျးငယျစီ ထညျ့ကြှေးပေးဖို့ လိုပါတယျ။သငျ့ကလေးဟာ နောကျဆုံးမှာ အသီးအရှကျနဲ့ပတျသတျပွီး သူ့စိတျပွောငျးလဲကောငျး ပွောငျးလဲသှားပါလိမျ့မယျ။ တခြို့ကလေးတှဆေိုရငျ သူတို့လကျမခံခငျ အစားအစာအသဈကို ၁၀ကွိမျလောကျ ကွိုးစားကြှေးကွညျ့ဖို့ လိုပါတယျ။
၃။ သငျ့ကလေးက အသီးအရှကျကိုကွိုးစားပွီး စားတဲ့အခါ ခြီးမှမျးပေးပါ
ကလေးတှဟော ခြီးမှမျးပေးရငျ ကနြေပျကွပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကလေးတှေ အသီးအရှကျစားနရေငျ သားလေး/သမီးလေးက တျောလိုကျတာလို့ ခြီးမှမျးပေးရငျ နောကျထပျ ပိုပွီးစားလာပါလိမျ့မယျ။ အသီးအရှကျမစားလို့ အပွဈပေးတာဟာ သငျ့ကလေးအတှကျ အသီးအရှကျက မကောငျးတဲ့အရာတဈခုအဖွဈ ပွောငျးလဲသှားနိုငျပါတယျ။ သငျ့ကလေးက စားဖို့ငွငျးဆနျနရေငျ အတငျးမကြှေးပါနဲ့ ။နောကျတခြိနျမှာ ပွနျပွီး ကွိုးစားကွညျ့နိုငျပါတယျ။
၄။ ဟငျးသီးဟငျးရှကျခကျြတဲ့အခါ သငျ့ကလေးကိုအတူတကှ ပူးပေါငျးပါဝငျခှငျ့ပေးပါ
သငျ့ကလေးဟာ မိသားစုထမငျးဝိုငျးအတှကျ ခကျြပွုတျခွငျးနှငျ့ ပွငျဆငျခွငျးမှာ ပါဝငျခှငျ့ရရငျ ပြျောရှငျပါလိမျ့မယျ။ ဥပမာ- မခကျြခငျမှာ ကလေးကို ဟငျးသီးဟငျးရှကျ ခွှခေိုငျးတာမြိုးက သငျ့ကလေးကို အသီးအရှကျ စားခငျြစိတျ ပိုဖွဈလာဖှယျ ရှိပါတယျ။
၅။ အသီးအရှကျကို သရစောအဖွဈ ကြှေးပေးပါ
အသီးအရှကျမြားကို သရစောပွုလုပျပွီးကြှေးပါ။ ကနျြးမာရေးနဲ့ မညီညှတျတဲ့ သရစောမုနျ့တှကေို ကနျ့သတျပွီး သရစောမုနျ့အတှကျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျကို အစားထိုးလြှငျ သငျ့ကလေးဟာ ဗိုကျဆာလာတဲ့အခါ အသီးအရှကျကို ပိုပွီးရှေးခယျြနိုငျဖှယျ ရှိပါတယျ။ ရခေဲသတ်ေတာထဲမှာ သခှားသီး၊ မုနျလာဥနီ ကဲ့သို့သော ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြားကို လှလှပပလှီးဖွတျပုံဖျောပွီး ဘူးထဲမှာ ထညျ့ထားပေးပါ။ ဟငျးသီးဟငျးရှကျကို သဘာဝ ဒိနျခဉျြ၊ ခြိဈတို့နှငျ့လညျး တို့ပွီး ကြှေးနိုငျသလို မုနျလာဥနီဖြျောရညျကဲ့သို့ အသီးအရှကျဖြျောရညျ ပွုလုပျပွီးလညျး ကြှေးနိုငျပါတယျ။
၆။ အသီးအရှကျတှကေို ပုံဖျောပွီးကြှေးပါ
အသီးအရှကျကို ကလေးတှကွေိုကျနှဈသကျမယျ့ ပုံစံအမြိုးမြိုး၊ အရောငျစုံလေးတှေ၊ ပုံဖျောပွုလုပျပွီးကြှေးတာက ကလေးအမြားစု စိတျဝငျစားတဲ့အရာဖွဈပါတယျ။ အသီးအရှကျစားရငျး ကလေးတှေ ပြျောရှငျလာပါလိမျ့မယျ။ ပနျးဂျေါဖီတို့လို အသီးအရှကျတှကေို ရနှေေးဆူဆူနဲ့ပွုတျပွီးမှသာ ကြှေးတာကောငျးပါတယျ။
၇။ အသီးအရှကျကို အခွားနညျးလမျးဖွငျ့ ကြှေးပါ
သငျ့ကလေး စားခငျြလာအောငျ အသီးအရှကျကို ဟငျးခြိုခကျြပေးတာဖွဈဖွဈ ကြှေးနိုငျပါတယျ။
သင့်ကလေးကို ဟင်းသီးဟင်းရွက် ပိုပြီးစားဖို့ ဘယ်လိုအားပေးမလဲ?
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို စားဖို့ ကလေးကို အားပေးအားမြှောက်ပြုရတာဟာ တခါတရံမှာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များက ကျန်းမာသော အစားအစာရဲ့ အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် သင့်ကလေးကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပိုစားဖို့ အလေ့အကျင့်လုပ်ပေးတာက အရေးပါပါတယ်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက် စားသုံးခြင်း ကလေးတွေအတွက် ဘာ့ကြောင့်အရေးပါတာလဲ?
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေက သင့်ကလေးကို စွမ်းအင်၊ ဗီတာမင်၊ အင်တီအောင့်ဆီဒင့်၊ အမျှင်ဓါတ်နဲ့ ရေကိုပေးပါတယ်။ သူတို့က သင့်ကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ရောဂါအမျိုးမျိုးကနေ ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ကျန်းမာတဲ့ အစားအစာဆိုတာ တခြားအစားအစာအုပ်စုများကနေ အမျိုးမျိုးသောအစားအစာ တို့အပြင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်အများကြီး စားသုံးခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ သြစတြေးလျအစားအသောက်လမ်းညွန်ချက်များက ၈နှစ်အောက် ကလေးငယ်များကို နေ့တိုင်း ဟင်းသီးဟင်းရွက် 2-4½ ကျွေးဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ သင့်ကလေးဟာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို အလုံအလောက်ကျွေးဖို့ ခက်ခဲနေရင် ဘယ်လိုစားချင်အောင်ကျွေးရမလဲဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်။
၁။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူ ဥပမာကောင်းတစ်ခု သတ်မှတ်ပါ
သင့်ကလေးဟာ သင့်ဆီကနေ အစားအစာရွေးချယ်မှုအကြောင်း သိရှိလာတာကြောင့် သင့်ကလေးကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားဖို့ အားပေးအားမြှောက်ပြုရမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက သင်စားတာကို သူမြင်ပြီး သင်ကိုယ်တိုင်က ပျော်ရွင်နေတဲ့ပုံ၊ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံ ဖြစ်ရပါမယ်။ မိသားစုထမင်းဝိုင်းက ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားခြင်း အပါအဝင် ကျန်းမာတဲ့ စားသောက်မှုအကြောင်းကို သင့်ကလေးအား သင်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို အရသာရှိရှိ ကြော်ကျွေးတာ၊ သုတ်ကျွေးတာ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၂။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို မြည်းစမ်းတဲ့အနေနဲ့ ကျွေးပါ
ကလေးတွေဟာ ပထမဆုံး သူတို့မြည်းစမ်းကြည့်တဲ့အခါ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို မကြိုက်ဘူးလို့ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကပုံမှန်ပါပဲ။ တခါမှမစားဖူးတဲ့ အသီးအရွက် ဆိုရင်လည်း မကြိုက်တတ်ကြပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ကို အစားစားချိန်မှာမြည်းစမ်းတဲ့အနေနဲ့ အနည်းငယ်စီ ထည့်ကျွေးပေးဖို့ လိုပါတယ်။
သင့်ကလေးဟာ နောက်ဆုံးမှာ အသီးအရွက်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူ့စိတ်ပြောင်းလဲကောင်း ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ တချို့ကလေးတွေဆိုရင် သူတို့လက်မခံခင် အစားအစာအသစ်ကို ၁၀ကြိမ်လောက် ကြိုးစားကျွေးကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။
၃။ သင့်ကလေးက အသီးအရွက်ကိုကြိုးစားပြီး စားတဲ့အခါ ချီးမွမ်းပေးပါ
ကလေးတွေဟာ ချီးမွမ်းပေးရင် ကျေနပ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးတွေ အသီးအရွက်စားနေရင် သားလေး/သမီးလေးက တော်လိုက်တာလို့ ချီးမွမ်းပေးရင် နောက်ထပ် ပိုပြီးစားလာပါလိမ့်မယ်။ အသီးအရွက်မစားလို့ အပြစ်ပေးတာဟာ သင့်ကလေးအတွက် အသီးအရွက်က မကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကလေးက စားဖို့ငြင်းဆန်နေရင် အတင်းမကျွေးပါနဲ့ ။နောက်တချိန်မှာ ပြန်ပြီး ကြိုးစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၄။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ချက်တဲ့အခါ သင့်ကလေးကိုအတူတကွ ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်ပေးပါ
သင့်ကလေးဟာ မိသားစုထမင်းဝိုင်းအတွက် ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းမှာ ပါဝင်ခွင့်ရရင် ပျော်ရွင်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ- မချက်ခင်မှာ ကလေးကို ဟင်းသီးဟင်းရွက် ခြွေခိုင်းတာမျိုးက သင့်ကလေးကို အသီးအရွက် စားချင်စိတ် ပိုဖြစ်လာဖွယ် ရှိပါတယ်။
၅။ အသီးအရွက်ကို သရေစာအဖြစ် ကျွေးပေးပါ
အသီးအရွက်များကို သရေစာပြုလုပ်ပြီးကျွေးပါ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ သရေစာမုန့်တွေကို ကန့်သတ်ပြီး သရေစာမုန့်အတွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို အစားထိုးလျှင် သင့်ကလေးဟာ ဗိုက်ဆာလာတဲ့အခါ အသီးအရွက်ကို ပိုပြီးရွေးချယ်နိုင်ဖွယ် ရှိပါတယ်။
ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ သခွားသီး၊ မုန်လာဥနီ ကဲ့သို့သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို လှလှပပလှီးဖြတ်ပုံဖော်ပြီး ဘူးထဲမှာ ထည့်ထားပေးပါ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို သဘာဝ ဒိန်ချဉ်၊ ချိစ်တို့နှင့်လည်း တို့ပြီး ကျွေးနိုင်သလို မုန်လာဥနီဖျော်ရည်ကဲ့သို့ အသီးအရွက်ဖျော်ရည် ပြုလုပ်ပြီးလည်း ကျွေးနိုင်ပါတယ်။
၆။ အသီးအရွက်တွေကို ပုံဖော်ပြီးကျွေးပါ
အသီးအရွက်ကို ကလေးတွေကြိုက်နှစ်သက်မယ့် ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ အရောင်စုံလေးတွေ၊ ပုံဖော်ပြုလုပ်ပြီးကျွေးတာက ကလေးအများစု စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ အသီးအရွက်စားရင်း ကလေးတွေ ပျော်ရွင်လာပါလိမ့်မယ်။ ပန်းဂေါ်ဖီတို့လို အသီးအရွက်တွေကို ရေနွေးဆူဆူနဲ့ပြုတ်ပြီးမှသာ ကျွေးတာကောင်းပါတယ်။
၇။ အသီးအရွက်ကို အခြားနည်းလမ်းဖြင့် ကျွေးပါ
သင့်ကလေး စားချင်လာအောင် အသီးအရွက်ကို ဟင်းချိုချက်ပေးတာဖြစ်ဖြစ် ကျွေးနိုင်ပါတယ်။
Previous articleမိခငျတဈယောကျဖွဈလာတာနဲ့အမြှ ဘာတှပွေောငျးလဲသှားမလဲ
Next articleမမေတေို့သိထားသငျ့တဲ့ သားသား/မီးမီးတို့ရဲ့ သှားသနျ့ရှငျးရေးအကွောငျး